Dawit Isaak oo 4500 oo maalmood ku jirsaday xabsi - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dawit Isaak oo maxkamad la'aan ku xabisan dalka Eriteriya 4500 maalmood. Sawirle: Kalle Ahlsén / SCANPIX / Kod 200
Dawit Isaak oo 4500 oo maalmood ku jirsaday xabsi
La daabacay fredag 17 januari 2014 kl 12.22
Maalinta sabtida ee berito magaalada Istockholm waxaa ka dhici doona bannaan-bax lagu xuseyo suxufiga eriteriyaanka-iswiidhishka Dawit Isaak ee ku xabisan dalka Eriteriya xukun la'aan. Iyada oo ey iminka ugu buux-santay xabsiga muddo gaarsiisan 4500 oo maalmood.
Kwame Toure, wuxuu ka soo jeedaa dalka Eriteriya. Toure wuxuu Iswiidhen ku dhaqnaa muddo 20 sannadood kor u dhaafeeysa, isaga oo dabadeed go'aansaday inuu dalkiisii hooyo dib ugu laabto.
Kwame Toure ayaan ahayn shakhsi siyaasadda xiiseeya, taabac-san ama ka soo horjeeda maamulka carrigaa ka jira iyo mucaaradka midna.
Rajadii uu ka qabay inuu Eriteriya dib ugu laabto ayuu weli niyadda ku hayaa, hase yeeshee uu dib ugu soo laabtay magaaladii uu labaatameeyada sannadood deggenaa ee Lund kolkii bishii diseembar ee sannadkii tagay.
- Wuxuu ahaa sannad aad u dhib badan, sannadkii aan eriteriya ku sugnaa. Sugitaan aad u dheer. Habka shaqo lagu helo ayaa aad u dhib badan. Biyo iyo koronto la'aan aan kala go'eyn, internet warkiisaba daa. War-bixin la'aan. Waxaad moodaa tiiyoo meel lagu banjaray.
- Waxaa sidoo kale dalka ku dhuumaaleeysaneya qaar ka mid ah saaxiibadey oo ka soo baxsaday ciidammada.
Dalka Eriteriya wuxuu ku sugan yahay xaalad dagaal, sida uu sheegay Kwame Toure.
- Intaa waxaa dheer in banaatiikhda kalaashnikov-ka loo qeeybiyey dhammaan ragga ku dhaqan Eriteriya iyo haweenka, kuwooda aan weli guur-san, sidii ey ku difaaci lahaayeen dalka.
- Waxaa lagu magacaabaa ciidanka bulshada.
Laakiin muddo iminka sannad laga joogo 21-kii bishii jannaayo ee sannadkii ina dhaafay 2013 waxaa la isku dayay inqilaab aaney jirin cid ka hadasha:
- Anigu waxaan arkay waddooyin laamiyo ah oo ey ka muuqdeen burbur ey ku sameeyeen shaagagga taangiyada oo ey ka muuqdeen dhammaan magaalada Casmara.
- Dad badan ayaa loo xirxirey isku-deygii inqilaabka dabadii. Qaar badan oo ka tir-sanaa milateriga iyo sidoo kale gudoomiyeyaal gobollo kala duwan. Hase yeeshee hoowluhu waxey u socdaan sidii caadiga ahayd. Cidna maxkamad lama soo taago. Lama ogsoona dembiyada dadkaasi lagu soo oogey, sida uu sheegay Toure.
Sidoo kale ma sahlana sidii wax looga ogaan lahaa suxufiga iswiidhishka eriteriyaan Dawit Isaak iyo xaaladdiisa.
- Anigu waxaan gaar ahaan u weeydiiyay saraakiil ciidammada ka tirsan inuu nool yahay iyo inuu Dawit Isaak nool yahay. Waxayna ii dammaanad qaadeen inuu nool yahay!
Dawladda dalka ka talisaana waxay dooneysaa iney nolol ku heeyso?
- Haa, una maleeyn maayo inay danahooda ku jirto inuu dhinto.
Laakiin waxaa ka wanaag-sanaan laha inay xabsiga ka sii daayaan?
- Xaqiiqdii haa. Laakiin maaha isaga oo keliya. Waxaa loo baahan yahay in xabsiga laga sii daayo dhammaan maxaabiista siyaasadda u xiran. Dhammaan waa in oodda laga qaadaa!
Nasiib-darro, xaaladdu waa mid mugdi ku jirta. Maamulka Eriteriyana halkiisa ayuu ka sii jiri doonaa, isaga oo weliba ku andacooneya in dalku ku sugan yahay xaalad dagaal kuna dhaqi doono nidaamkaa, illaa inta uu maamulka Itoobiya ka tix-gelin doono go'aankii hayadda caalamiga ah ee Qarammada Midoobey ay ka gaartay xurguftii xuduudda ee u dhexeeysay labada dal ee Eriteriya iyo Itoobiya. Waa sida uu aamin-san yahay Kwame Toure.